Ọnwụ ọrụ ndị njem North Queensland ga -abawanye site na ekeresimesi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Australia » Ọnwụ ọrụ ndị njem North Queensland ga -abawanye site na ekeresimesi
Akụkọ mkpakọrịta • Akụkọ na -agbasa Australia • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Mpaghara ahụ tolitere ndị ọrụ ya n'ofe igwe ọkọnọ niile dị njikere maka oge oyi na -arụsi ọrụ ike, mana ugbu a ndị ọrụ ọhụrụ a, gụnyere ihe karịrị 200 sitere na ụlọ ọrụ njem, ndị nọrọla ọzụzụ ọnwa ole na ole ka a na -agwa ka ha chọta ọrụ ọzọ.
Tropical North Queensland na -akwado nkwado maka mfu ọrụ njem 3,150 site na ekeresimesi.
Ndị ọrụ njem nlegharị anya nke TTNQ na-agbada ọkara nke oke ọrịa tupu ọrịa ebido.
Enwere mfu ọrụ TTNQ n'ofe ụlọ ọrụ niile.
Ọrụ njem nlegharị anya Tropical North Queensland ọzọ 3,150 ga-efunahụ ya site na ekeresimesi na-ebelata ndị ọrụ nlegharị anya na ọkara nke ọrịa tupu ọrịa amalite, dị ka nyocha ọhụrụ sitere na njem nlegharị anya na njem njem (TTF).
Njem Nleta na-eme njem nlegharị na North Queensland (TTNQ) Onye isi ndị ọrụ Mark Olsen kwuru na njem nlegharị anya were ndị ọrụ 15,750 oge niile na ndị ọrụ nwa oge na, site na mmefu njem nlegharị anya na-akwado ọrụ 25,500 tupu oria ojoo na mpaghara Cairns.
Mazị Olsen kwuru, "Ka ọ na -erule July 2021, anyị efuola ndị ọrụ 3,600 na -adịgide adịgide, ọbụlagodi na nkwado JobKeeper na ahịa ụlọ na -alọta."
“Mpaghara ahụ tolitere ndị ọrụ ya n'ofe igwe ọkọnọ niile dị njikere maka oge oyi na -arụsi ọrụ ike, mana ugbu a ndị ọrụ ọhụrụ a, gụnyere ihe karịrị 200 sitere na ụlọ ọrụ njem, ndị nọla ọzụzụ ọnwa ole na ole ka a na -agwa ka ha chọta ọrụ ọzọ.
“Ndị ọrụ na -akwụ ọtọ ma na -efu ọtụtụ awa ọrụ n'ihi mkpọchi mkpọchi na mpaghara ha nwere ike nweta ihe ruru $ 750 kwa izu. Ọdachi COVID-19 ịkwụ ụgwọ nkwado ego sitere na Centrelink, ”ka o kwuru.
Advance Cairns CEO Paul Sparshott kwuru na ikike akụ na ụba mpaghara iji gbakee ga -ebelata nke ukwuu ma ọ bụrụ na ndị ọrụ nwere nkà efunahụ mpaghara njem na ile ọbịa.
"A ga -enwe oke ntaramahụhụ. Mgbe ahịa ndị njem na -emetụta nke ukwuu, ọ na -agafe na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na -emetụta akụnụba mpaghara niile, "
Mazị Olsen kwuru na Tropical North Queensland bụ, ọ ga -adịgidekwa, otu n'ime mpaghara kacha emetụta Australia na echiche maka ụlọ ọrụ njem na -adịghị mma.
“Enweghị ndị ahịa, ụlọ ọrụ achụmnta ego enweghị ntụgharị iji debe ndị ọrụ ha nwere nka nke ukwuu, ụfọdụ n'ime ha anatala ọzụzụ ọtụtụ afọ na mpaghara pụrụ iche ka ha bụrụ ndị na -anya ụgbọ mmiri, ndị isi na -amaba mmiri na ndị isi na -amali elu nke na -enye ahụmịhe njem nlegharị anya mpaghara.
“Anyị nwere ụgbọ mmiri na -eji naanị ndị njem isii na ndị ọrụ ụgbọ mmiri anọ apụ na ọtụtụ ebe egwuregwu na -enwe obere oge azụmaahịa, ebe ndị ọzọ abanyela n'ụra.
“Ka ezumike ụlọ akwụkwọ na -abịa, ọrụ mkpọsa ahịa TTNQ na Septemba na Ọktọba ga -adabere nke ukwuu na ndị mmekọ na -ahụ maka njem iji nwaa ma nye ndị ahịa obi ike maka akwụkwọ ebe ha maara na mgbanwe ga -aga n'ihu.
“Ozi sitere na ụlọ ọrụ njem azụmaahịa na-egosi na Cairns ka bụ ebe nke ise a na-achọkarị na nke isii kachasị njem njem n'ime izu anọ gara aga, mana anyị na-agba ọsọ na-erughị 25% nke nyocha na 55% nke akwụkwọ site na ebe anyị nọ. COVID."